Ahoana ny fomba hanovana haingana ny bokotra, ny menio, ny varavarankely ary ny loko misongadina amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Izaho no izydeMac
Ahoana ny fomba hanovana haingana ny bokotra, ny menio, ny varavarankely ary ny loko misongadina amin'ny Mac
Ity dia zavatra tsy vaovao ary azo inoana fa efa fantatrao ny fomba ovao ny loko ny bokotra, ny menus, ny varavarankely ary ny fanasongadinana amin'ny Mac, fa ho an'ireo izay tonga ao amin'ny Mac izao, mety ho tena ilaina tokoa ny mahafantatra ireo safidy fikirakira tsotra sy mora an'ny Mac-nay ireo.
Tokony holazaintsika fa ity tutorial kely ity na ireo dingana tokony harahina hanovana ity fanovana kanto ity amin'ny Macs, dia manolotra fifandraisana voalohany aminy ny fanovana vitsivitsy azo atao amin'ny interface macOS, noho izany dia fomba tsara hijerena ny halaviran'ny Apple ny fetra amin'ny fiovan'ny toetrantsika fitaovana.
Mba hanaovana ireo fanovana ireo toy ny mahazatra dia tsy maintsy mandeha any amin'ny rafitry ny rafitra isika ary noho izany dia miditra amin'ny Pane ho an'ny safidin'ny System, izay ahitantsika eo am-piandohana ireo safidy misy hisafidianana ity loko vaovao ity amin'ny bokotra, menus, windows ary ireo lahatsoratra voafantina. Mba hahatongavana any dia tsy maintsy manaraka ireto dingana tsotra ireto isika:
Safidintsika ny menio Apple  - Preferensi System ary kitiho ny General
Raha vantany vao eto, kitiho ny menio latsaka ambany ny fisehoana ary safidio ny loko tianay hampiasaina amin'ny bokotra, menus ary varavarankely. Amin'ity tranga ity dia misy roa ihany.
Azontsika atao ny manindry ny menio latsaka ambany "loko misongadina" ary amin'ity dia misafidy ny loko hanasongadinana ny lahatsoratra voafantina isika. Eto dia manana safidy bebe kokoa isika.
Vantany vao vita dia azontsika atao ny manampy ny maody maizimaizina ao amin'ny tsipika menio, misafidy ny safidy na manafina ary mampiseho an'io bara io ho azy. Tsy misy isalasalana fa zavatra tena fototra amin'ny resaka fanovana ny interface interface, saingy io no kely avelan'i Apple hikasika an'io lafiny io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hanovana haingana ny bokotra, ny menio, ny varavarankely ary ny loko misongadina amin'ny Mac
Ny Plex DVR dia nampiakatra ny famokarana Apple TV hatrany amin'ny ambaratonga faha-n
Michael Abbott no fanaovan-tsonia farany nataon'i Apple hanatsarana ny AI